Xaflad lagu taageerayay dhismaha maamulka K/galbeed Soomaaliya oo lagu qabtay Minneapolis (Sawirro) – Radio Muqdisho
Xaflad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee maamulka K/galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
Munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka, kana soo jeeda gobollada K/galbeed Soomaaliya, waxaana xaflada lagu soo bandhigay suugaan iyo khudbado lagu taageerayay dhismaha maamulkaasi iyo madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay.
Xubnihii jaaliyadda ee halkaasi ka hadlay ayaa muujiyay sida ay ula dhacsanyihiin dhismaha maamulkaasi, iyagoo ballan qaaday ineey gacan buuxda ka geeysan doonaan horumarinta gobolladaasi.
Madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay maamulkaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan ayeey ugu tahniyadeeyeen xilka loo doortay, waxeyna u rajeeyeen inuu xilkaasi u guto si wadaniyad iyo howlkarnimo leh.
Waxeey ugu baaqeen bulshada ku nool gobollada K/galbeed ineey maamulka cusub kala shaqeeyaan nabadgelyada, ayna u soo jeestaan horumarinta deegaannadooda.
Barcelona oo Dirqi uga Badisay Kooxda Valencia
Maalinta AIDIS-ka oo caalamka laga xusayo iyo Dr. "Dufle" oo ka hadlay halista cudurka